Kathmandu24 || 24*7 News In Nepali Language » दिल्लीमा लकडाउन गरिए पनि कसरी भेटिए ८० हजार बढी कोरोना संक्रमीत ?
दिल्लीमा लकडाउन गरिए पनि कसरी भेटिए ८० हजार बढी कोरोना संक्रमीत ?
काठमाडौं । ८० हजारभन्दा धेरै संक्रमित भेटिएको भारतको राजधानी सहर दिल्ली कोरोना भाइरस (कोभिड-१९) को सबैभन्दा ठूलो ‘हटस्पट’ बनेको छ ।
दिल्लीको तुलनामा भारतका अन्य साना सहरहरूमा कोरोना भाइरस नियन्त्रणका लागि राम्रो काम भएका छन् । भारतको दक्षिण सहर बैङ्ग्लोरमा कन्ट्याक्ट ट्रेसिङलाई प्राथमिकता दिइएको थियो, जसको कारण यो सहरमा संक्रमण नियन्त्रणमा देखिएको छ भने चेन्नईमा तुलनात्मकरुपमा हेर्ने हो भने मृ त्युदर कम छ ।
भारतको वित्तीय राजधानीको रुपमा चिनिएको मुम्बई भने महामारीबाट निकै प्रभावित बनेको छ । अहिले दिल्लीले मुम्बईलाई पनि पछि पारिसकेको छ । साथै दिल्लीका सार्वजनिक अस्पतालमा पनि ठाउँको अभाव देखिएको छ । भारतको सबैभन्दा राम्रो स्वास्थ्य प्रणाली भएको स्थान अहिले कोभिड १९ का बिरामीको उपचारको लागि संघर्ष गरिरहेको देखिएको छ ।
इन्डियन काउन्सिल अफ मेडिकल रिसर्च (आईसीएमआर)को एक अध्ययनका अनुसार गत जनवरीदेखि अपि्रलसम्मको अवधिमा भारतमा औसतमा एक संक्रमित बाट औसतमा २० जनाको परीक्षण गरिएको छ । तर यसमा पनि राज्यनुसार निकै ठूलो असमानता देखिएको छ ।
‘तपाईंलाई प्रहरीबाट फोन आउँछ, तपाईंलाई डिस्ट्रिक सर्भेलाइन्स कार्यालयबाट फोन आउँछ र तपाईंलाई निकै टाढा रहेको कुनै क्वारेन्टिनमा लगेर राखिन्छ भनेर भन्छ भने परीक्षण गर्न को आउँछ ?’ सात्विक बताउँछन् । उनका अनुसार मानिसमा क्वारेन्टिनमा बस्नु सजायजस्तै भएको बुझाइ छ । साथै, लामो समयसम्म लाइनमा बसेर कोरोना भाइरसको परीक्षण गराउनुको सट्टामा घरमा नै सुरक्षित बस्न मानिसहरू रुचाउने उनले बताए ।
पछिल्लो समय दिल्लीका अस्पतालहरूमा बेडको अभाव देखिएको थियो । साथै, कोभिड १९ का बिरामीलाई भर्ना लिन अस्वीकार गरिएको थियो । यसले मानिसहरूमा आक्रोश पैदा भएको थियो । डर तथा सामाजिक कलंकका कारण यो महामारीको रुपमा सामुन्नेमा नआएको विशेषज्ञहरूको भनाइ छ ।